Astaamaha Aasaasiga ah ee iPhone iyo Qalabka
IPhone 4 iyo kuwa horay u soo maray waxay ka badan yihiin kaliya taleefannada gacanta. Iyada oo ay kala duwan yihiin - ka telefoonka si browser browser ah, laga bilaabo iPod si qalabka ciyaarta mobile - iPhone wuxuu u eg yahay kombiyuutarka ku habboon jeebkaaga iyo gacantaada ka badan telefoonka gacanta kasta.
Jirka ahaan, iPhone 4 wuxuu ka duwan yahay qadarka macaamiisha ah ee iPhone 3GS iyo moodooyinka hore, kuwaas oo dhammaantoodba muuqaal ahaanba la mid ah.
Inkasta oo bandhigga guud ee iPhone 4 uu la mid yahay kuwii horay u soo maray, haddana waa ka duwan yahay in aan mar dambe loo xirxirin geesaha, waxaa ka mid ah wajiga muraayada ee hore iyo gadaal, ku duubaya anteeno ku wareegsan dibadda taleefanka (taas oo sababtay anteeno Dhibaatooyinka qaarkood ), oo waxoogaa yar yari.
Dhamaan iPhones waxay bixiyaan shaashad 3.5-inch oo taabanaya tiknoolajiyada isgaadhsiinta. Tijaabooyin badan ayaa u ogolaanaya dadka isticmaala in ay kontoroolaan sheyada shaashadda oo leh hal farsamo oo isku mid ah (sidaas darteed magaca). Waa wax aad u taabbagaliya oo u sahli kara qaar ka mid ah waxyaabaha ugu caansan iPhone, sida shaashada laba jeer si aad u fogeysid ama "jiido" iyo jiidaya farahaaga si aad u fogeyso .
Farqiyada kale ee ka dhexeeya iPhone 4 iyo moodooyinka hore waxay ka mid yihiin adeegsiga Apple processor A4, ka mid noqoshada laba kameradood, shaashad sare , iyo kor u qaadida nolosha batroolka.
Labaduba waxay isticmaalaan seddex seddex dareemayaal ah si ay u soo saaraan qaar ka mid ah qaababka ugu fiican ee loo adeegsado, inkasta oo aysan jirin qaabkani wuxuu ku deeqayaa xasilloonida ama dib loo cusbooneysiin karo .
Sababtoo ah iPhone wuxuu u eg yahay kumbiyuutar yaryar, wuxuu bixiyaa isku mid ah qaababka iyo shaqooyinka kombiyuutarka uu sameeyo. Meelaha ugu muhiimsan ee howlaha iPhone waa:
Phone - Tilmaamaha telefoonka ee iPhone waa mid adag. Waxaa ku jira muuqaalada cusub sida Visual Voicemail iyo qaababka caadiga ah sida fariinta qoraalka iyo wacitaanka codka .
Raadinta Webka - iPhone wuxuu bixiyaa khibradda ugu fiican ee ugu wacan ee xawaaraha mobile. Inkastoo aysan taageereynin plug-ka Flash browser , haddana uma baahna boggaga "mobile" ee bogagga, halkii ay ku bixin lahayd wax dhab ah oo telefoon ah.
Email - Sida dhammaan telefoonada casriga ah, iPhone wuxuu leeyahay muuqaalada email xooggan oo wuxuu isku-duba-gali karaa shirkadaha email-ka ee shirkadaha is-dhaafsada.
Jadwalka / PDA - iPhone waa maamulaha macluumaadka shakhsiyeed, sidoo kale, taariikhda jadwalka, buugga cinwaanka , stock-tracking, cusboonaysiinta cimilada, iyo sifooyinka la xiriira.
iPod - Tilmaamaha gaaban ee iPhone waa telefan isku-jira oo la isku daro iyo iPod, sidaas darteed dabcan ciyaaryahankiisa muusikada wuxuu soo bandhigayaa dhammaan faa'iidooyinka iyo qaboojinta iPods.
Ciyaarta Video - Iibkeedu waa mid aad u qurux badan, qurux badan, 3.5-inch, iPhone waa door weyn oo loogu talagalay cayaarta fiidiyaha gacanta, haddii loo isticmaalo codsi-ku-sameynta YouTube, iyada oo lagu darayo fiidiyowgaaga gaarka ah, ama iibsashada ama kireynta content ka dukaanka iTunes.
Apps - Marka lagu daro App Store, iPhones hadda waxay maamuli kartaa dhammaan noocyada barnaamijyada sadexaad, laga bilaabo ciyaaro (labadaba lacag la'aan iyo lacagba) Facebook iyo Twitter si loo helo makhaayadaha wax soo saarka iyo wax soo saarka wax soosaarista . App Store ayaa ka dhigaya iPhone oo ah khadka ugu faa'iidada badan.
Cameras - Mid ka mid ah isbeddel weyn oo ka mid ah iPhone ayaa lagu daraa laba kameradood, halka moodooyinkii hore oo keliya ay lahaayeen mid. Kamaradda ku taal gadaasha taleefanka waxay ku jirtaa sawirrada 5-megapixel, waxayna qaadataa 720p HD video. Kamaradda isticmaalaysa waxay u ogolaataa joornaalka FaceTime video .
Qalabka guriga iPhone
Iyadoo la sii daayo barnaamijka iphone ee software -ka ah ee software-kumbuyuutarka - version 1.1.3 , isticmaalayaashu waxay dib u habayn karaan calaamadaha muuqaalka guriga . Tani waxay si gaar ah waxtar u leedahay markaad bilowdo barnaamijyo ka socda App Store, maadaama aad kooxo isku mid ah u isticmaali kartid ama kuwa aad isticmaasho inta badan, wadajir.
Dabcan, awood u leh inuu dib-u-sameynaayo astaanta sidoo kale wuxuu keenaa dhacdooyinka lama filaanka ah, sida dhammaan calaamadaha shaashaddaada oo gariiraya .
In kasta oo qaababka xakameynta iPhone ee qaboojiyaha ay ku saleysan yihiin shaashadda istiraatiijiga ah, waxay sidoo kale leedahay tiro farabadan oo wejiga ah oo loo isticmaalo xakamaynta.
Badhanka guriga - badhanka, hoose ee telefoonka ka hooseeya shaashadda, waxaa loo isticmaalaa in telefoonka laga toosiyo hurdo iyo xakamaynta sifooyinka muuqaalka .
Riix badhanka - Geeska dhinaca midig ee kore ee iPhone, waxaad ka heli doontaa badhanka gacanta. Riixitaanka badhanka ayaa xiraa shaashadda iyo / ama telefoonka ku seexiyaa. Sidoo kale waa furaha loo isticmaalo in lagu soo celiyo telefoonka.
Button Volume - Dhinaca bidix ee taleefanka, badhanka dheer ee soo socdaa kor iyo hoos ayaa gacanta ku haya mugga muusikada, fiidiyaha, iyo raadiyaha telefoonka.
Badhanka riix - Ka sarreeya xakamaynta mugga ayaa ah badhanka habka hooseeya. Tani waa badhanka raadiyaha, kaas oo kuu ogolaanaya inaad telefanka geliso hab xasilan sidaa daraadeed farriintu ma dhawaaqayso marka wicitaanadu yimaadaan.
Dock Connector - Dukumiintaan, ee ugu hooseysa taleefanka, waa meesha aad ku rakibtid fiilada si loo xoojiyo telefoonka kombiyuutarka, iyo sidoo kale qalabka.
Isticmaalka iPhone leh iTunes
Sida iPod, iPadka waxaa lagu dhejiyaa oo la maareynayaa adeegsiga iTunes.
Dhaqdhaqaaqa - Markii ugu horeysa ee aad hesho iPhone, waxaad u hawlgelisaa iyada oo loo marayo iTunes oo dooro qorshaha telefoonkaaga billaha ah adiga oo isticmaalaya barnaamijka.
Isku-xoqin - Marka taleefanka la kiciyo, iTunes waxaa loo isticmaalaa in lagu soo bandhigo muusikada, fiidiyowyada, jadwalka iyo macluumaadka kale telefoonka.
Dib u soo celinta iyo Ku-soo noqoshada - Ugu dambeyntii, iTunes waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in la bilaabo xogta ku saabsan iPhone oo dib u soo celinta waxyaabaha ka soo kormeer haddii dhibaatooyinku kuu keenaan inaad u baahan tahay si aad u tirtirto waxyaabaha ku jira telefoonka.
Isticmaalka iPod Touch ee Nidaamka iyo Khariidadaha
Anigu waxaan qabaa iPhone ... Waa maxay xiga?
Sida Loo Jabsado Gabayada iTunes
Sidee ayaad kuugu dhejin kartaa Nano iPod Nano?
Waxa la Qabanayo Marka iPhoneka La Xado
DDoS Diidmada Hack: Faragelin cusub ayaa ka soo baxa internetka
Vizio S2121w-Do Soodhiga Maqalka - Dib u Eegid
Beddelida Mashiinka Baaritaanka ugu Badan ee Chrome ee loogu talagalay iOS
Toban 10 Shey oo laga bilaabo CEDIA 2013
World of Warcraft PC Cheats Talooyin iyo Talooyin
Faa'iidooyinka Casrading Style Sheekooyinka
Waa maxay sawir-qaadashada?
Sidee loo Dhifiyaa Sawir Goobta Fariinta ee Muuqaalka
Internet Protocol (IP) Tababarka
Telefoonada ugu fiican ee 2018
Liiska Barnaamijyada Heerka Sayniska ah ee Sameeya Muusikada Bilaashka ah
My Windows 10 Update failure
Shaqada ku Saabsan Nidaamka Cusboonaysiinta Haddii Wii Wii Guryeyn Lahaa
41 Barnaamijyada Barnaamijka Burburinta Macluumaadka Bilaashka ah
Maxay yihiin qoysaska font qurxinta ee CSS?
Sida Loo Adeegsado Makiinada Raadinta ee Internet Explorer 8
Baro inaad beddesho Boostada Default ee AIM Mail ama AOL Mail